Daawo Dagaal beeleed ka dhashay Dhul beereed oo shalay ka dhacay Wanlaweyn iyo Maamulka Degmada Ka hadlay | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo Dagaal beeleed ka dhashay Dhul beereed oo shalay ka dhacay Wanlaweyn...
Daawo Dagaal beeleed ka dhashay Dhul beereed oo shalay ka dhacay Wanlaweyn iyo Maamulka Degmada Ka hadlay
Magaalada Wanlaweyn ee dhica Koofur bari Gobolka Shabeelaha Hoose waxaa shalay ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed, waxaana isku dhaca labada dhinac uu salka ku hayaa muran ka dhul Beereed.
Dadka deegaanka waxa ay SMC u sheegeen in dagaalka uu geystay khasaare dhaawacyo oo kala gaaray dhinacyadii dirirta dhexmartay, inkasta oo aan lahayn inta uu gaarsiisan yahay.
Sidoo kale goobjoogayaal waxa ay SMC u sheegeen in iska hor imaadka uu daba socday isku dhac Shalay galab dhexmaray labadaan Maleeshiyo beeleed oo sababay khasaare kala duwan.
Dadka shacabka waxa ay walwal ka muujinayaan saameyn dadaalka iyo aanooyinka ka dhasha ee uu ku reebi karo, maadaama dhowr dad rayid ah oo dhinacyada dagaalamay meelo kala duwan lagu dilay.
Ma jiro war kasoo baxay Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose kan Wanlaweyn faah-faahin ay ka bixiyeen Qasaaraha Soo gaaray balsee iska hor imaadka maleeshiyo beeleedyada hubeysan ee Shalay Galab ku dagaalamay Degmadaas lkn muqaal maanta nasoogaaray ayaa tilmaamaayo Magaalada Wanlaweyn ee dhac Koofur bari Gobolka Shabeelaha Hoose Dagaal beeleed oo is ku haystay oo hal lagagaaray.
Ka Daawo muqaalka halka hoose
Previous articleKenya says its envoy in Somalia not received official call to leave country
Next articleDib udhacii Jadwalka Doorashada kadib Guddigii la magacaabay Oo War soo saaray